Hannaanka Cabashada - SEIU6
Habraaca Tallaaba-tallaabada ah
Heshiiskaaga ayaa qori doona qodobadda habraaca cabashada ee midowgaaga uu ka gorgortamay.
Habraaca cabashooyinku wuxuu kor ugu sii kacaa “tallaabooyin” (laga bilaabo wada hadallada hore ee lala yeesho kormeerayaasha heerka hoose ilaa iyo dhexdhexaadin buuxda), iyada oo tallaabo kasta loo cayimay waqti xaddidan. Waa inaad isku daydo inaad buuxiso shuruudaha tillaabo kasta watiyada la cayimay gudahooda. Haddii aad sidaas samayn waydo, iyada oo aan lahayn sabab sax ah, waxaad ku waayi kartaa cabashada dhan farsamo.
Sida caadiga ah, kor u kaca wuxuu u dhacaa sidan:
TALLAABADA 1 Wakiilka ayaa la kulmayo kormeerayaasha heerka hoose.
TALLAABADA 2 Haddii aan xal la helin, wakiilka wuxuu la kulmayaa maamulka sare.
TALLAABADA 3 Haddii aan xal la helin, waxaa jiri kara kulan kale sida Tallaabada 2, ama dabcan “guddi” cabasho, ama haddii kale gabi ahaan waxaa la aadayaa:
GARQAADID Halkaas oo qofna uusan rabin inay gaarto, balse dhibaatada waxaa halkan ku xallin doona koox saddexaad oo dhexdhexaad ah.
Si aad u xaqiijiso inaadan waligaa ku guul daraysanin cabasho sababtoo ah inuu wakhtiga cayiman ku dhaafay aawadeed, waa inaad taqaano goorta saxda ah oo ay tahay inaad xerayso cabashadaada iyo rafcaannada lagama maarmaanka ah. Macluumaadka waxaa laga heli karaa heshiiskaaga. Haddii aad kaalmo u baahan tahay, fadlan kala xiriira Xarunteena Macluumaadka Xubnaha lambarka 206-448-7348 ama Seiu6mrc@seiu6.org.
Go’aanka lagu aadayo garqaadista ma noqon doono mid si fudud lagu qaato. Waxay ku xirnaan doontaa waxyaabaha sida muhiimada arrinta uu leeyahay (dhibaatada), darnaanta kiiska, kharashka, iyo fursadaha in lagu guuleysan karo. Baaritaankaaga, qoraaladaada, iyo warbixinadaada ayaa dhab ahaanti muhiim noqon doona marka go’aannada noocaas oo kala ah la gaarayo.
Soo djiso Foomka Cbashada ee SEIU Local 6